NET Blogde blọgụ Platform | Martech Zone
Monday, May 28, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Enweghị m ike ịchị ọchị kama m chịrị ọchị mgbe m nwara ịlele NET Blogging Engine nke a tọhapụrụ:
Ana m arụ ọrụ na ụlọ ahịa .NET, ya mere amaara m na ndị mmepe ga-enye m nsogbu oge banyere nke a echi. Echere m na m ga-arapara n'ahụ WordPress na PHP / MySQL ruo oge ụfọdụ!
Mee 29, 2007 na 8: 12 AM
N'agbanyeghị ala maka mmezi.
Ọ bụchaghị nnukwu mmalite!
Mee 29, 2007 na 10: 40 AM
Nke a bụ ihe ọchị. Daalụ maka ịkekọrịta.
Mee 30, 2007 na 10: 00 AM
Ọ bụ ihe ọchị, amaara m. Site na mberede m hichapụ ụfọdụ faịlụ site na sava weebụ - faịlụ enweghị m onwe m. Ọ dị nnọọ mkpịsị aka ma kwesịtụ ntakịrị ntakịrị, ọkachasị n'ihi na akwụkwọ akụkọ Danish ka bipụtara otu akụkọ gbasara ya kwa ụbọchị. Doh!